Radio Simba – Page 5 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Kiisaska Caabuqa Carona-Virus ee Soomaliya oo Gaaray 1,502 xaaladood
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay ay xanuunka Karoona ka bogsoodeen 15 qof taaso oo tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigeysa 178 oo ka dhigan inay xanuunka ka reysteen ku dhawaad 12% dadkii uu feyrusku haleelay. Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaan geliyay 47 xaaladood oo kala jooga ...
Maxkamadda ICJ oo Dib u Dhigtay Kiiska Dacwadii Badda ee Somaliya iyo Kenya
Garsoorka maxkamadda caddaaladda caalamiga ah ee ICJ ayaa ku dhawaaqay in mar kale dib loo dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. War maanta kasoo baxay maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa lagu sharraxay sababta dib u dhigista iyo waliba jadwalka dhageysiga kiiskaas. Warqad loo diray dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayey ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhur Talaado ah Tariikhdana ay Ku beegan tahay 19/10/2020
Mareykanka oo Shacab Waxyeelo u Geystay Deegaanka Kuunyo Barroow+Sawirro
Diyaaradaha Dowladda Mareykanka ee wax duqeeya ayaa dad shacab ahaa waxyeelo ugu geystay Gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Duqeynta ayaa lala beegsaday guri dad shacab ah deganaayeen oo ku yaala deegaanka Kuunyo Barroow ee Gobolka Shabeelaha Hoose. Sawirro laso bandhigay ayaa muujinaya waxyeelada duqeynta ka dhalatay. Sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka diyaaradaha Mareykanka ayaa guriga la beegsaday 6-gantaal waxaana ...
Al-shabaab oo Sheegay in uu Ka Badbaaday Mid Kamid ah Xildhibaanada
Al-shabaab ayaa sheegay in uu ka badbaaday Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Hir-shabeelle. Warbaahinta Shabaab ayaa lagu baahiyay in weerar lagu qaaday xalay guri uu xildhibaanka dagan yahay oo ku yaala degmada Balcad ee Shabeelaha dhexe. Inkastoo Shabaab aysan sheegin magaca Xildhibaanka,balse waxa ay xaqiijiyeen in uu ka badbaday weerarka lagu qaaday. Al-shabaab ayaa kordhiyay Mudooyinkii dambe weerarada ay ku ...
Ciidamadda Danab oo Howlgal Ka Fuliyay Deegaanka Wargalo Ee Gobolka Mudug
Wararka ka imaaanaya Deegaanka Wargalo Ee Gobolka Mudug ayaa ku waramaya in ciidamada Danab ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay deegaankaas ka fuliyeen howlgal qorshaysnaa. Ciidamadda Danab ayaa gudaha u galay guri ku yaala Deegaanka Wargalo,waxaana la sheegay in ay halkaas kala baxeyn Nin hubeysnaa oo guriga la weeraray ku sugnaa. Sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka Tirsan Maamulka Galmudug,waxaa jirey iska ...
Page 5 of 2,325« First...«34567	»	102030...Last »